Home Wararka Sheekh Sharif oo si toos ah ula saftay Villa Somalia
[DAAWO] Sheekh Sharif oo si toos ah ula saftay Villa Somalia
MW Hore Sharif Sheekh Axmed oo soo duubay video uu uga hadlaayo weerarkii ka dhacay 23 Maarso xerada Xalane iyo weerarkii qaraxyada ahaa ee lagu dilay Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi, ayuu ku sheegay hadalkiisa in falalka amni darro ee faraha kasii baxay aay masuul ka tahay kooxda Shabab.
Sharif aya iska indha tiray tuhunka laga qabo in kooxda Villa Somalia ay ku lug leedahay labada fal ee ka dhacay Muqdisho iyo Beledweyne iyadoo dhammaan diblomaasiyiinta jooga Xalane aay eedda dusha ka saareen Villa Somalia.
Waxaa indhaweydba socotay in Sharif iyo Villa Somalia uu ka dhexeeyo xiriir hoose isagoo galaangal ba’an ugu jira in uu mar kale ku guuleysto kursiga Madaxweynaha, Shariif aya ku soo hungoobay safaro uu ku raadinaayay dhaqaale uu ku galo Doorashada, safaradaas ayuu ku tagay dalalka Imaaraadka, Qatar, Turkey iyo Kenya balse uu kala soo laabtay faramarnaan.
Sharif aya waxaa ololihiisa Doorashada hadda si toos ah isugu dhiibay Fahad Yasin.
Previous articleAl-Shabaab’s Expanding Anti-Turkish Campaign in Somalia
Next articleTuulada Af-urur ee Gobolka Bari ee Puntland oo Al Shabaab weerar ku qaaday
Hon Mahad Salaad. ‘Aamusnaanta Madaxda DF ee xasuuqii dhallinyarada waa tusaale...
(Deg Deg) Maareeyihii Golaha Murtida Abwaan Guure oo xilka laga qaaday...